Travel Archives - Lifestyle Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းမှာပဲ စွန့်စားမှုတွေရှာဖွေရင်း ခရီးသွားချင်ပါတယ်ဆိုသူများအတွက် လှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေ၊ သဘာဝဆန်ဆန် အလှတရားတွေနဲ့အတူ ကလောြမို့လေးက ကြိုဆိုနေပါတယ်။ အေးချမ်းသာယာတဲ့ဒီမြို့လေးက စွန့်စားမှုတွေနဲ့အတူ Trekking သွားမလား၊ မြို့ထဲမှာပဲ အစားအသောက်တွေပတ်စားရင်း လျှောက်လည်မလားဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက Trekking မပါဘဲနဲ့တော့ ကလောခရီးစဥ်က ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်း Kalaw Trekking က သွားရတာပင်ပန်းသလောက် ပင်ပန်းတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ရှုခင်းတွေ၊...
နယ်မြေအနှံ့ကို ခြေဆန့်သွားလာဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် အဓိကအားကိုးရမယ့်အရာက လေကြောင်းလိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လေကြောင်းလိုင်းတိုင်းက စီးနင်းသူတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ မြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း အခွင့်အရေးရလာတာနဲ့ အာရှတိုက်တစ်ခွင် လှည့်လည်သွားလာဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့အာရှဒေသအတွင်း သွားလာစရာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် အာရှတိုက်က အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်း (၅) ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်း အခြားသော ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းမှ လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ...
ကမ္ဘာ့အဆန်းကြယ်ဆုံးသော ဟိုတယ် ၅ လုံး
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီတွေထဲကမှ ထူးခြားဆန်းပြားစွာ လူတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆားခဲတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဟိုတယ် ဒီဟိုတယ်ဟာ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံ လူနာဆလာဒါမှာ တည်ရှိပြီး ဟိုတယ်တခုလုံးကို ဆားခဲတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဟိုတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပရိဘောဂများနဲ့ မျက်နှာကျက်များအတွက် ဆားခဲပေါင်းတသန်းကျော်ကို အသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီဆားခဲဟိုတယ်သည် ကောချန်နီရွာအနီးရှိ တောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး နာမည်ကျော်ဆားငန်အိုင်ကိုလည်း အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရှုခင်းမျိုးဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆားခဲတွေထဲမှာ...
လာမယ့်ပိတ်ရက် (၃) ရက်မှာ ခရီးထွက်အပန်းဖြေကြမယ့်သူများအတွက် ….
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများစု ရပ်နားထားရပေမယ့် အချို့သောပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေက တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်အစပျိုးလာခဲ့ကြပြီး မနက်ဖြန်ကစလို့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နဲ့ အာဇာနည်နေ့ အစားထိုးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဇူလိုင် (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀) ရက်တို့မှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်ကြမယ့်သူတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အများစုက ပိတ်ထားကြဆဲဖြစ်ပြီး Walk- in နဲ့သာ တည်းခိုခွင့်ပြုထားတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ကလော၊ တောင်ကြီး၊ မန္တလေးနဲ့...
ကိုဗစ်အလွန်မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုအလည်အပတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ???
လတ်တလောမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ကခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအားလုံး ရပ်ဆိုင်းသလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီကပ်ဆိုးကြီးပြီးသွားတဲ့တစ်နေ့မှာ အိမ်ထဲနေရင်း ပင်ပန်းနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးက စိတ်အပန်းပြေဖို့အတွက် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ခရီးထွက်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ တချို့က ပြည်တွင်းမှာလည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကို ခရီးသွားကြမှာဖြစ်သလို၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူနဲ့စုမိဆောင်းမိရှိတဲ့သူတွေကတော့ ရေခြားမြေခြားကို သွားရောက် အပန်းဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ အခုတင်ဆင်ပေးချင်တဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာပဲရှိတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကနေ လွယ်လင့်တကူ သွားရောက်လို့ရပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာနိုင်တာကြောင့် ဗီယက်နမ်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။...
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ Honeymoon ထွက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာ ၅ ခု
နှစ်ယောက်တဘဝကို စပြီးတည်ဆောက်တဲ့ အချိန်မှာ တသက်တာလုံးအမှတ်တရဖြစ်နေစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး လက်ထပ်ပြီးကာစ ချစ်သူတွေဟာ ပျားရည်စမ်းခရီးထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်အတူတူရုန်းကန်တည်ဆောက်ကြမယ့်ဘဝတခုကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် မစတင်ခင်မှာ ခေတ္တအနားယူအားဖြည့်တဲ့ ခရီးမျိုးလို့ ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးတဲ့ နေရာဒေသတွေကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လက်ထပ်ပြီးခါစ ချစ်သူစုံတွဲသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက် ရှာဖွေမှုအများဆုံးနေရာဒေသတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုနေလိုနေရာတွေကို ရှာဖွေကြတာလည်း၊ ဘာတွေထူးခြားမှုရှိလို့လည်းဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုများ ကမ္ဘာ့ကြီးရဲ့ အဝေး၊ လူတွေရဲ့...
ခရီးသွားတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါနော်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ အထုပ်အပိုးတွေ ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ခရီးသွားတာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာဖတ်သူတို့ အခက်မတွေ့ရလေအောင် အထုတ်အပိုးတွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထည့်ပိုးရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ အဝတ်စားတွေကို မခေါက်ဘဲ လိပ်ပေးပါ။ အဝတ်စားတွေကို ခေါက်ပြီးပြားပြားမထက်ဘဲ လိပ်ပြီးထည့်ပေးတာက အဝတ်စားတွေလည်းပိုဆံ့သလို ထုတ်ပိုးရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ လိပ်တဲ့အခါမှာလည်း တီရှပ်အင်္ကျီကို ၅ ထည်လောက်တစ်ခါတည်းလိမ့်ပေးပါ။ ဘောင်းဘီတိုဆိုလည်း ၃ ထည်လောက်အတူတူလိပ်ပေးတာမျိုး တူတာလေးတွေကို တစုတည်းလိပ်ထည့်ပေးပါ။...
ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကြသလိုပဲ လေယာဥ်စီး၊ ကားစီးတဲ့အခါအချိန်တွေက ဘယ်ခရီးစဥ်မဆိုရဲ့ အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ လေဆိပ်၊ ကားဂိတ်တွေဟာ အမြဲတမ်းလူတွေနဲ့ပြည့်ကြပ်နေပြီးတော့ အချိန်အကြာကြီးစီးရတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ခရီးသွားချိန် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သွားချင်သလို သူများတွေလည်း အတူတူဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးမွေးမြူရင်းနဲ တခြားသူတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ ဒီလိုပါ။ လူ့လောကကြီးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်ရပ်တည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်ဖက်လူကို အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်၊ ပြုံးပြ၊...
ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ကြုံတွေ့ခဲ့သမျှ စိတ်ညစ်စရာ၊ ပင်ပန်းကုန်ဆုံးခဲ့သမျှ အားအင်တွေအားလုံးကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ အားလပ်ချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခရီးသွားနေကြမဟုတ်တဲ့ တစ်ချို့သောသူတွေအတွက်တော့ ခရီးသွားခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရ၊ အကျိုးကျေးဇူးကို သေချာနားလည်သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ အချိန်ရှိတုန်း ခရီးသွားမယ်မဟုတ်ဘဲ နောက်လ၊ နောက်နှစ် စသဖြင့် တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်လာခဲ့မိရင် အရွယ်ရလာတဲ့အခါ အများကြီးနောင်တရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း ပညာတွေကြိုးစားသင်၊ ပိုက်ဆံကြိုးစားရှာရသလို ကိုယ့်အတွက်နားချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးရှာသင့်တယ်ဆိုတဲ့...
လူတစ်ယောက်အတွက် မိသားစုဆိုတာဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးအရာပါ။ ကိုယ့်အပေါ်မှာ နားလည်နိုင်ဆုံး၊ အနစ်နာခံဆုံး၊ အချစ်ဆုံးဟာ မိသားစုသာဖြစ်ပေမယ့်လည်း တချို့လူတွေကတော့ မိသားစုရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ သူများတကာတွေလိုမျိုး မိသားစုအတူတူ ခရီးသွားပါဆိုရင် ဟိုလိုကြောင့်၊ ဒီလိုကြောင့်ဆိုပြီး အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုး၊ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုး ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်လေးရှိတဲ့ မိသားစုတွေပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ချို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော့ ခရီးထွက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမယ့် ကလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး အမြဲပေးလေ့ရှိတဲ့ ဆင်ခြေတွေက...